Musharrax madaxweyne Afrikaan ah oo maalinkii doorashada u jiifa isbitaal cudurka Covid-19 – Calanka.com
Musharrax madaxweyne Afrikaan ah oo maalinkii doorashada u jiifa isbitaal cudurka Covid-19
Murashaxa madaxtinnimada ee mucaaradka ah ee Congo-Brazzaville ayaa maalintii doorashada ku qaatay cisbitaalka kadib markii uu si aad ugu xanuusanayey Covid-19. Muuqaal ku dhex wareegaya baraha bulshada, Guy Brice Parfait Kolelas oo 61 jir ah ayaa la arkaa isaga oo si kooban u siibaya maaskarada loo yaqaan ‘oxygen’ si uu ugu sheego taageerayaashiisa inuu “la dagaallamayo geerida”.
Wuxuu ku boorinayaa inay u codeeyaan codbixinta Axadda.Madaxweyne Denis Sassou Nguesso, oo si weyn loogu arko inuu yahay hoggaamiye kali talis ah, ayaa la filayaa inuu markale guuleysto.Mr Kolelas, oo qaba cudurka macaanka, wuxuu ka mid yahay lix musharax oo la tartameysa Mr Sassou Nguesso, oo 77 jir ah.Xubnaha qoyska ayaa sheegay inay isku dayayaan inay abaabulaan sidii loogu qaadi lahaa Faransiiska si loogu daweeyo.
Mr Kolelas ayaa seegay ololihi ugu dambeysay ee ololihiisa jimcihii ka dib markii uu maalin ka hor sheegay inuu ka cabsi qabo inuu qabo cudurka duumada, sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Associated Press.Waxaa la dhigay isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaal magaalada caasimada ah ee Brazzaville, waxaana markii dambe la xaqiijiyay inuu hayo cudurka loo yaqaan ‘Covid-19’.Isaga oo ku hadlaya luuqadda Faransiiska isagoo sariirta cisbitaalkiisa jiifa, Mr Kolelas wuxuu yiri: “Walaalahayga qaaliga ah, waxaan ku jiraa dhibaato. Waxaan la dagaalamayaa geerida. Sikastaba, waxaan idinka codsanayaa inaad u istaagtaan oo aad u codeysaan isbadal. Uma aanan dagaalami lahayn wax aan jirin.”